theZOMI: [mrsorcerer:37698] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၃)
[mrsorcerer:37698] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၃)
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၃)
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်ပြန်
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေပေါ်က ရက်စက်မှုအကြောင်း လွတ်မြောက်လာသူများ ဖွင့်ဟ
ထွေ/အုပ်ရုံးမှ သင်္ကြန် စတစ်ကာ တစ်စောင် ကျပ် (၁၀၀၀)နှင့် အဓမ္မရောင်းချနေ
မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့ ထုတ် အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၁၃)
မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် Smart Pro Journal (မိုဘိုင်း နှင့် နည်းပညာ ဂျာနယ်) အတွဲ (၁) အမှတ် (၁၀)
မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် Mobile Guide Issue 97
တံတားနီနေ့ ၂၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပခြင်းအပေါ် ကိုစည်သူမောင်အား တရားဆွဲဆို
မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှု သံသယရှိသူတွေ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
ပါကစ္စတန် သမ္မတဟောင်း မူရှာရက်ဖ် ပြည်တော်ပြန်
မိတ္ထီလာမြို့ ဒုက္ခသည်တွေမှာ အမုန်းတရားတွေမတွေ့ရကြောင်း ဗီဂျေးနမ်ဘီယား ပြောကြား
အစိုးရအနေနဲ့ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ဖို့ တောင်းဆို
မိတ္ထီလာမြို့ အဓိကရုဏ်ဖြေရှင်းရေးဆွေးနွေးမှု မူ ၆ ချက်ချမှတ်
တပ်ကုန်းနဲ့အုတ်ဖိုမှာ အမည်မသိလူအုပ်စုတွေ ဝင်ရောက်မီးရှို့
Posted: 25 Mar 2013 06:49 AM PDT
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို.နယ်တစ်ချို.တွင် ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ. အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက Venus News သို. ယနေ.ညပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။ ---
Posted: 25 Mar 2013 06:05 AM PDT
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်မှုများ အပါအ၀င် အကြမ်းဖက်မှု အားလုံးကို အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အစွမ်းကုန် တားဆီးကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
Posted: 25 Mar 2013 04:45 AM PDT
မန္တလေးတိုင်း အိုးသည်ကုန်း မြို့မှာ အိမ်တွေနဲ့ ပလီ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူပေါင်း ၃၀ဝ လောက်ပါတဲ့ အုပ်စုဟာ အိုသည်ကုန်းက ပလီ တလုံးကို တိုက်ခိုက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်နဲ့ ဈေးဆိုင် ၂၀ ကျော်ကိုလည်း ဖျက်ဆီး သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။
မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့်မြို့နယ်အတွင်း မင်္ဂလာဈေးနှင့် ယုဇနပလာဇာ တဝိုက်ရှိ ဆိုင် အများအပြားကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဆိုင်ရှင်များပိတ်သိမ်းနေသည် ဟူသော ထွက်ပေါ်နေသော ကောလာ
ဟလ များကြောင့် လူအများကြား စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေကြောင်း ယုဇနပလာဇာတွင် ဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားသူ ---
Posted: 25 Mar 2013 04:21 AM PDT
မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများမှာ ယခုအခါ တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန် အပါအ၀င် အချို့မြို့ကြီးများ၌ ဆူပူမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောလာဟလများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုအပေါ် မယုံကြည်ကြရန်နှင့် နယ်မြေတည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ---
Posted: 25 Mar 2013 03:50 AM PDT
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင် ညွန့်မြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေ လုပ် ဆောင်ဖို့ အော်ဟစ် လှုံ့ဆော်သူ လူတစုကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ မတ် ၂၄ ရက်ည သန်းခေါင်းယံ အချိန်မှာ Townace ကား ၁ စီးနဲ့ ဂျစ်ကား ၁ စီးပေါ်က လူတစုဟာ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ လိုက်လံ လှုံ့ဆော် အော်ဟစ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ---
Posted: 25 Mar 2013 03:33 AM PDT
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာ တောင်ညွန့် မြို့နယ်တွင် လူတစ်စုက အုပ်စုဖွဲ့၍ ရန်ပြု ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းများ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်ထွက် ပေါ်နေပြီး ယင်းသတင်းများမှာ မဟုတ်မှန်ဘဲ ကောလာ ဟလများကြောင့် ယင်းမြို့နယ်တွင်း လူစုလူဝေးများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို ---
မင်္ဂလာ တောင်ညွန့် မြို့နယ်မြင်ကွင်း - သတင်း-ဓါတ်ပုံ ၊ The Voice Weekly
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယနေ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေအနေအချို့အရ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးအပြီး၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုန်ပြန်ရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ---
လှည့်ကင်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၂၄.၃.၂၀၁၃ ရက်နေ့ညတွင် မြင်တွေ့ရပုံ ။ ဓါတ်ပုံ - ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ 
Posted: 25 Mar 2013 02:44 AM PDT
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကဟု ခန့်မှန်းရသော ရှေးဟောင်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတော် တစ်ခုကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနမှ ရှာဖွေ တူး ဖေါ်ရရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းတော်ကြီးကို ပါလ မင်းဆက် ဒုတိယ ဓမ္မပါလ မင်း လက်ထက် အေဒီ (၉၀၀ နှင့် ၁၁၀၀) ကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ----
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ရှိ သံတွဲခရိုင် လ၀ကရုံး ယမန်နေ့က မီးလောင်ရာ စာရွက် အများအပြား မီးထဲ ပါသွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေ ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သံတွဲမြို့နယ် ----
Posted: 25 Mar 2013 02:20 AM PDT
ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီဝန်းကျင်တွင် မြောက်ပိုင်းခရိုင် ယာဉ်လိုင်းမှ အမှတ် ၁၂၄ အထူး ယာဉ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း နှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့် အရောက်တွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ယာဉ်ကြော ညာဘက်အခြမ်းရှိ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်း အုတ်နံရံကို အရှိန်ပြင်းစွာ ၀င်တိုက်ခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ---
Posted: 25 Mar 2013 01:59 AM PDT
မြို့နယ်တချို့မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားတဲ့အတွက် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက စာဖြေသံဃာတော်တွေကို ဒီလကုန်ပိုင်း ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ဓမ္မစရိယ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲတွေကို သင်္ကြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ ကျင်းပတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ---
Posted: 25 Mar 2013 01:44 AM PDT
ခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ မပျော်ကြဘူးလား။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒါဆိုရင် အလုပ်ခွင်တွင်း စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် အလုပ်မ၀င်ခင်နဲ့ အလုပ်ခွင်တွင်းမှာ ဘာတွေသိသင့်၊ လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို လင်းလက်ကြယ်စင်က ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
အသံဖိုင် နားဆင်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ လစာကို ဘယ်လိုညှိနိုင်းမလဲ။
Posted: 25 Mar 2013 01:29 AM PDT
ထိုင်းလူမျိုးပိုင် ငါးဖမ်းလှေပေါ်ကနေ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူ မြန်မာအမျိုးသား တွေက သူတို့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ပြောပြတဲ့အခါမှာ လခမပေးဘဲ ခိုင်းရုံသာမက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်မှုတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ---
Posted: 25 Mar 2013 01:13 AM PDT
25.3.2013 နံနက် (၇)နာရီမှ (၁၀)နာရီအထိ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့၊ မွေတော် ဘုရားကြီးရှေ့တွင် ဟိုပုံးမြို့ (၅)ရက်တစ်ဈေးသို့ လာရောက်ကြသော ဒေသခံ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီများကို မြို့နယ်အရံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး မှ ----
သင်္ကြန်စတစ်ကာလက်မှတ်များ တစ်စောင်လျှင် (၁၀၀၀)တစ်ထောင်ကျပ် ဖြင့် အတင်းအဓမ္မတားဆီး ရောင်းချလျက်ရှိ
Posted: 25 Mar 2013 12:59 AM PDT
တံတားနီနေ့ အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် ပြည်လမ်းမပေါ်ရှိ အင်းလျား ကန်ဘောင်ပေါ် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (တ.က.သ) မှ ကိုစည်သူမောင်အား တရားဆွဲ ဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ ---
Posted: 24 Mar 2013 08:26 PM PDT
မိတ္ထီလာမြို့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ နဲ့ သေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးမင်းအောင်ကို ညဦးပိုင်းက ဆက်သွယ်မေးကြည့်ရာမှာ နောက်ဆုံးစာရင်းအရ သေဆုံးသူ ၃၆ ဦးရှိပြီး၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အိမ် ၁၃၃ လုံးအနက်၊ ၁၀၃ အိမ်ဟာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အိမ်တွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ----
Posted: 24 Mar 2013 06:13 PM PDT
ပါကစ္စတန် သမ္မတဟောင်း ပါဘက် မူရှာရက်ဖ် ဟာ တိုင်းပြည် ပြင်ပမှာ သူ့သဘောနဲ့ သူ အဝေးရောက် အနေနဲ့ ၄ နှစ်ကြာ နေထိုင် ခဲ့ပြီး နောက် အခုတော့ ပါကစ္စတန် ကို ပြန်သွား ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ကရာချိ လေဆိပ်ကို ရောက်လာတဲ့ မူရှာရက်ဖ်ကို လက်နက် အပြည့် အစုံ တပ်ဆင် ထားတဲ့ ----
ပါကစ္စတန်ဟာ ကျွန်တော့် အတွက် အရေး အကြီးဆုံးပါ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူရှာရက်ဖ်)
Posted: 24 Mar 2013 06:02 PM PDT
မိတ္ထီလာမြို့မှာ အစ္စလာမ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ နေကြပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အမုန်းတရားတွေ မတွေ့ရဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယား (V J Nambiar) က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ---
Posted: 24 Mar 2013 05:55 PM PDT
ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ အမျိုးမျိုး စုပေါင်းနေထိုင် နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူအားလုံး ချစ်ကြည်ငြိမ်းချမ်း နေထိုင်ကြဖို့၊ အစိုးရအနေနဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့က ဒီကနေ့ သဘောထား ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ---
Posted: 24 Mar 2013 05:48 PM PDT
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သုံးဦး မနေ့ကတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။---
Posted: 24 Mar 2013 04:31 PM PDT
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း တပ်ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ(အနော်ရထာ)ရပ်ကွက် မှာ ပလီတစ်ခုအပါအဝင် အိမ်ငါးလုံး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ ---
မိတ္ထီလာမြို့ မှာ မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပွါးခဲ့စဉ်
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/25/2013 10:42:00 PM